Sebenzisa iindlela zePanorama kunye neFoto Sphere yeendlela
Isitokhwe seKhamera yeapps yeKhamera ineendlela zokudubula ezingaphaya komgangatho osele usemfanekisweni kunye nevidiyo. Iindlela ezimbini ezongezelelweyo ezinokuthi zibandakanyeke ngokwenyani yiPanorama kunye nePhoto Sphere.
Ukuzama ezi ndlela zebhonasi, chukumisa imo yekhamera kwiNkqubo yekhamera. Iindlela ezine ezifumanekayo kwi icon yekhamera yekhamera zibonisiwe kulo mzobo.
Iimo ze-panorama kunye neefoto zesigaba sokuvumela ukuba ubambe umhlaba okujikeleze ngendlela ekhethekileyo.
Imowudi yepanorama kukudubula okubanzi. Isebenza ngokuphelisa ifowuni kwindawo yonke. Inkqubo yeKhamera emva koko idibanisa imifanekiso eliqela yokwakha umfanekiso we-panoramic.
Imowudi yesigaba somfanekiso ifana nepanorama ejikeleziweyo, egubungela ngasekhohlo, ngasekunene, phezulu, ezantsi, nangayo yonke indawo. Iziphumo zokugqibela ngumfanekiso onxibelelanayo onokuthi upheke kwaye uthambekele kuwo ukuze ubone yonke into ekujikelezileyo.
Ukudubula i-panoramic shot, landela la manyathelo kwi-app yeKhamera:
Khetha iPanorama kwi icon yekhamera.
Bamba ifowuni uzinze, emva koko ucofe i icon yeShutter.
Jikeleza kwicala elinye.
Sebenzisa ingxelo yescreen sokukukhokela; landela kunye nopopayi.
Emva kokuba i-panorama ifakiwe, jonga njengoko umfanekiso unikezelwa. Igcinwe kwigalari, kunye nazo zonke ezinye iifoto zakho.
Ukwenza ifoto yokuma, thobela la manyathelo kwiNkqubo yekhamera:
Ukusuka kwimenyu ye icon yekhamera, khetha Ifoto Sphere.
Beka ifowuni endaweni yayo ukuze ichaphaza elikwisikrini lihambelane nesangqa.
Sebenzisa ubume obuphezulu obuvela kwiscreen ukukunceda ulungelelanise ikhamera.
Ngokucwangcisiweyo jika macala onke, ulungelelanise ikhamera enamachaphaza avela kwiscreen.
Awugqibanga de ube uyimilisele ikhamera ngalo lonke ichaphaza.
Emva kokuba umfanekiso wenqanaba lomfanekiso ugqityiwe, usetyenziso lweKhamera lunika iziphumo zokugqibela. Ungayisebenzisa kwigalari okanye uyibone kwangoko ngokuswayipha ikhusi ngasekhohlo. Chukumisa i icon Photo Sphere ukunxibelelana (pan kunye nokuthambeka) kunye nembonakalo yomfanekiso.
Iifoto zesigaba somfanekiso sisebenza ngokukuko kwindawo emileyo, enje ngemihlaba kunye nemifanekiso yobomi. Ukuzama ukuthatha ifoto yesigaba somfanekiso wabantu okanye ezinye izinto ezinomdla, ezinje ngesitampu, kunika iziphumo ezidanisayo.
Isebenza njani i-valacyclovir
Iipilisi zedayimane eblue 100
i-bacitracin zinc kunye ne-polymyxin b sulfate
eyona ntsholongwane ilungileyo ye-uti